Kungenzeka yini ukuba umuntu azimele ukulungisa Chainsaw "Husqvarna"?
imodeli ngamunye inezidingo zayo siqu Chainsaw for ukusebenza nokuphila zenkonzo yalo. Ikakhulukazi, ukusetshenziswa njalo eside kumele ithengwe ithuluzi kuphela professional, njengoba hhayi onobuhle yasekhaya zingamelana kabi. Kodwa akukho lutho kuleli zwe sihlala kuze kube phakade, futhi ngoba ukukhanda chainsaws "Husqvarna" Kungenzeka ukuthi liyadingeka.
Uma sicabangela izindleko of ukulungisa iphutha futhi "ukuziphatha okubi" service izikhungo eziningi, siyohlale isifiso ukukwenza ngokwakho. Qaphela ukuthi uphumelele kulungiswe Chainsaw "Husqvarna" incike izinto ezimbili:
Ingabe unayo okungenani umqondo anolaka mayelana namathuluzi kudivayisi uphethiloli;
Stock izandla ezinemininingwane block umdwebo ayengasetshenziswa inhlangano zabona futhi disassembly.
Okwakubaluleke ngokukhethekile sekuyisikhathi sokugcina: akukho izikimu ngaphezulu akuzona yini ngisho nokuzihlupha uzama ukuba aqale ukulungisa, ngoba imiphumela "isinyathelo" yakho ungenqaba ukwamukela ngisho esikhungweni sesevisi.
Ngokuvamile, ukukhanda of chainsaws "Husqvarna" Awu okungenani yokuthi umenzi njalo babiza imikhiqizo yabo imiyalelo enemininingwane, elihunyushwe ngokugcwele olimini umthengi. Ngaphambi kokuthi uqhubeke, sicela uyifunde, wenze isitatimende. Ukuqala ukuqaqa okwabonwa, ungabi lazy uthwebule ngokuphelele zonke izigaba zomsebenzi ngosizo ikhamera noma i-camcorder: ingenye yezindlela ezethembekayo ukuvimbela "ezingadingekile" ngokuningiliziwe.
Ngokuvamile ukulungisa Chainsaw "Husqvarna 137" kudinga ukuqedwa nezinkinga carburetor. Futhi hhayi noma imuphi umshado, futhi njengoba uphethiloli zasekhaya, okungase uyibize ngokuthi ekahle. Carburetor zezikhali egumbini ezomile futhi engenazo izintuli, futhi le njongo kuyinto efiselekayo ukusebenzisa ulwelwesi, okuyinto evimbela ukunyamalala okuyimfihlakalo izingxenye zalo mshini.
Hlaziya ke, kufanele uthanda ke ukuba wageza futhi bahlanza. Kuvame ongcolile fuel isihlungi igridi, odinga wekulihlanta kakhulu.
Ngabona ukuthi eminyakeni emibili basebenza okuvamile fuel lezo zinqubo ezimweni eziningi kwanele. Finyelela izithombe zakho, ebonisa inqubo disassembly, futhi baqala ukuqoqa isaha oda reverse. service izikhungo Izazi zithi lokhu Chainsaw ukulungisa "Husqvarna" isiqedile.
Kodwa ukusinqanda yikhona njalo kungcono kunokwelapha. Ezimweni eziningi (ngaphandle umonakalo mechanical kuya izindlu kanye wesifunda) okufanele asolwe fuel ukwehluleka abampofu. Ungalokothi wenze ingxube nophethiloli "zigciniwe", njengoba inombolo octane inakekelwa for lungene amasonto amabili.
Ngaphezu kwalokho, alusoze ukugcina uphethiloli ukukhwezelwa nezipakupaku kusukela plastic kwakwakhe zikaphethiloli yakha omningi umule ekamelweni piston. Ukwanelisa "osekudlulelwe yisikhathi" ethangini fuel, ngesikhathi isondele breaking blade yakhe.
ithuluzi Crank ngokuqinile ulandele iziyalezo ezikuyo, ahlukanise phakathi ukuqalisa ikhompiyutha futhi kushisa. Ungayisebenzisi ke ngezinhloso ezingafakwanga kusengaphambili ngumkhiqizi. Kuphela ngaphansi kwalezi zimo, balungise Chainsaw "Husqvarna 142" (noma kweminye imihlobo lokhu umakhi) kuyodingeka ukuthi wena kukalutshwana kakhulu!
"Samsung" umshini wokuwasha "Eco Bubble": yokusetshenziswa, amaphutha kanye amakhodi zabo
Manual okulinganisa valve: izinhlobo, umsebenzi, ukufakwa
Freshness ezonini esiqandisini - kuyini? Lalihlehliswa endaweni esiqandisini nge freshness
Amathuluzi ukuhlanza conditioner imoto emoyeni: ukukala, izici kanye nokubuyekeza
Electric JIG akubona itafula ngokhuni: imodeli izici. Izingxenye ze-Jigsaw
Alain. igama Isici. Isiphetho nobunjalo
Umlobi Yuri Nikitin: Biography, izithombe, izibuyekezo
Ngena ngemvume semifula nokubaluleka kwalo. Isibonakaliso ku-delta, "uLizwi"
Ubunye eJalimane ngo-1990, futhi imiphumela yayo kwezepolitiki
Wasezulwini - a ... Siyini ongokwasezulwini: yencazelo
Inyumoniya Basal: Izimpawu kanye Ukwelashwa. inhalation inyumoniya
Sims 4: ukwaziswa okwengeziwe kanye nokunye okuqukethwe
Indlela yokuphatha stomatitis ezinganeni
Mangakhi amahora ngosuku, imizuzu namasekhondi, futhi kungani kwenzeka
Ungangena kanjani kwikhabhinethi yomuntu "Beeline"? "I-Beeline": ukufinyelela kwekhabhinethi yomuntu oyibhalisile